Ị pụrụ isi gosi m otú Google rankings na-mekọrịtara na m backlinks database?
Site na iri afọ gara aga, òkè ọdụm nke ndị nwe ụlọ na ndị webmasters emeela ka ọtụtụ ndị na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị atụ ma ọ bụ na-eme ka ha bụrụ ndị na-enweghị atụ - niile n'ihi na ọkwa ọkwa dị elu dị na SERPs nke Google. N'ihi ya, ihe dị ka afọ ise gara aga, isi nyocha search nyere mbụ Penguin algorithm melite - ịmalite ịmebanye aha ma debanye aha ọtụtụ PBN (netwọk nkeonwe nzuzo), na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ugbo, jikọta wiil (mgbanwe), yana ịzụlite a na-acha uhie uhie na ọkọlọtọ ọbịa maka njikọ ụlọ. Ọ bụ ya mere ọbụna ntakịrị ihe dị iche na ntuziaka ndị isi nke Google na-enweghị isi, spammy ma ọ bụ akara azụghachị na-eme ka mmadụ nwee ike ugbu a tinye ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog na-akwụ ụgwọ ụgwọ.
Google Na-akọ Ezi Njikọ Site na Ndị Ọjọọ
Ihe mbụ nke na-egosi mmekọrịta dị nro n'etiti data backlinks gị na ọnọdụ ọkwá dị na Google bụ na A na-ejikọta ụwa nke oge a na njikọta. Ọtụtụ n'ime ha na-emepụta ígwè ọrụ ntanetị. A na-eke ụfọdụ maka ire ere buru ibu ma ọ bụ zubere maka mgbanwe azụmahịa ọ bụla. N'otu oge ahụ, ụfọdụ njikọ nwere ike ịṅa ntị zuru oke ka ha lee anya dịka o kwere mee, ndị fọdụrụ n'ime ha bụ njikọ ndị editọ akwụkwọ ochie. Ya mere, isi ihe ịma aka maka Google bụ iji nyochaa backlinks nchekwa data nke ọ bụla na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog - ịghọta onye na-egwu egwu egwuregwu na n'ezie kwesịrị ịbụ họọrọ na elu.
Ntọala Backlinks na Ezi Omume
N'ezie, mgbe isi engines ọchụchọ dị ka Google n'onwe ya na-egosi njikọ na saịtị gị ma ọ bụ blog, enwere naanị atọ nhọrọ maka backlink ọ bụla nwere. Echere m na enwere ike ịmata ya dị ka ihe bara uru na uru ị tụlere na isi nyocha nke Google na algorithm. N'otu oge ahụ, ihe niile nwere ike ịdọrọ otu - a ga - enwetakwa njikọ ụfọdụ dị ka ihe efu na enweghị ihe ọ bụla - n'enweghị mmetụta ọ bụla site n'aka SEO. E kwuwerị, ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog gị nwere ike ịbụ nke a ga-edozi, nyere ya na akụkụ nke njikọ gị na backlinks nchekwa data (ma ọ bụ naanị otu njikọ dị iche) a na-enyo enyo na ọ bụ nke azu ma ọ bụ nke okike.
Eziokwu Nzuzo Banyere Rankings na Backlinks Database
Ya mere, enwere mmekọrịta dị n'etiti ọnọdụ n'ezie na SERPs na weebụsaịtị backlinks website ọ bụla.Ma, olee otú ọ ga-esi sie ike? Nke a bụ ndepụta nke ihe nkedo iji gosi ihe njikọ ndị ọzọ nwere ike ime na ọkwa gị na ọnụ ọgụgụ.
ọkwa dị elu na SERPs na ọnụ ọgụgụ nke njikọ njikọ na ihe dịka 30 n'ogologo;
nhazi njikọ a nwere ike iyi ihe dị egwu karị, ebe ọ bụ na nkwekọrịta ndị dị ntakịrị adịghịkwa eju anya - ịtụle na Google nwere ike ịdabere n'ihe dị ka ogo ogo ogo 200;
ihe kariri 99% nke weebụsaịtị na blọọgụ niile nyochaa site na nyocha ọhụụ na-adịbeghị anya nwere ka ọ dịkarịa ala otu njikọ mpụga na-apụtaghị ìhè;
ihe dị ka pasent 22 nke ibe ọ bụla chọtara nke ọma na ọ nweghị nsụgharị azụ ọzọ;
inwe njikọ ndị ọzọ nwere ike ime ka ọnọdụ dị elu dị elu, ma ịkụ nzọ na ọnụ ọgụgụ ha kama ịdị mma apụtaghị na ebe nrụọrụ weebụ gị ga-egosi na nchọta ahụ Source .